WAR TANOO KALE: Daafac laga ceyrinayo kooxdiisa kaddib markii uu qiray inuu CIRBAD ku mudi jiray weeraryahanada – Gool FM
“Hantideyda qeyb halaga siiyo Hooyadey haddii aan Isbitalka ku dhinto.”.- Van Dijk
“Waxaan u baahannahay inaan ooyno maxaa yeelay riyadeenna ayaa rumowday” – Mauricio Pochettino
WAR TANOO KALE: Daafac laga ceyrinayo kooxdiisa kaddib markii uu qiray inuu CIRBAD ku mudi jiray weeraryahanada
Byare June 15, 2017
(Argentina) 15 Juunyo 2017. Daafac u dhashay dalka Argentina ayaa wajahaya in laga ceyriyo kooxda kaddib markii uu qiray inuu Cirbad nasliga uga qaaday weeraryahanada ka soo horjeeday.
Federico Allende, daafac u ciyaara kooxda heerka hoose ee Pacífico de General Alvear ayaa sheegay inuu Baasanjiyeerigiisa ku soo qarsaday labo CIRBADOOD.
Mar uu la hadlayay Radio gudaha dalka Argentina, Allende ayaa qiray inuu marar badan cirbad ku muday weeraryahanka reer Colombia ee Juan Otero isagoo sheeganaya inaad u baahan tahay inaad ciyaarto ciyaar wasaqeysan haddii aad dooneyso inaad ka adkaato kooxaha heerka koowaad.
Kooxdiisa ka dhisan magaalada Mendoza ayaa 3-2 koobka uga qaaday kooxda heerka sare ee Estudiantes.
Allende ayaa lagu casuumay inuu ka hadlo Raadiyowga si uu uga hadlo guusha uu gaaray, mar la waydiiyay sida uu koobka ugu guuleysteen ayuu ka dhawaajiyay wax lala amakaagay.
“Waa inaan doortaa laacibkii waynaa eee Bilardo,” Ayuu yiri.
Waa sheeko tix raaceedu u laabanayo tababarihii xulka Argentina Carlos Salvador Bilardo kaa oo koobka adduunka kula guuleystay Diego Maradona 1986-dii.
Waxaa Bilardo lagu eedeeyay inuu Cirbad ku mudi jiray ciyaartoyda ka soo horjeeda waagii uu ciyaartoyda ahaa lixdameeyadii.
“Maxaad iga filaneysaa inaan sameeyo?,” Allende ayaa sidaa ku bilaabay qisadiisa yaabka leh
“Kubbada cagta waxaa iska leh dadka xariifiinta ah.
“Waan ogeyn inay tahay inaan kulanka ka dhigno mid wasaqeysan, waxaana cirbad ku durayay weeraryahanada kooxda Estudiantes.
“Waan ogeyn in ciyaartoydan ka imaaneysa heerka koowaad aysan jacelyn ciyaarta Rafka ah, marka aad qaadato waqtigaaga, marka aad u ciyaarto si wasaqeysan.
“Miskiinka waa inuu i nacaa.
Dhibanihii cirbada nasliga looga qaaday Otero ee weerarka kaga ciyaarayay Estudiantes oo isna ka hadlay sheekadan yaabka leh ayaa yiri:
“Afar jeer ayuu igu muday, booska ayaan badeshay maxaa yeelay wuu i durayay markasta aan istaago.
“Garsooraha ciyaarta ayaan u sheegay balse ima uusan rumeysan, sidoo kale calan wadaha dheesha ayaan ku wargaliyay balse wuu igu qoslay, dhabarka ayuu cirbad iigaga muday.”.
Isku soo wada duuboo dagaalyahanka reer Argentina Federico Allende ayaa lagu wadaa in kooxda laga ceyriyo kaddib markii uu madaxa kooxda sheegay in haddii uu go’aanka gacantiisa ku jiri lahaa uu kooxa ka burin lahaa.
W/D: Abdisamed Mohamed Hassan (BlackYare).
RASMI: Southampton oo ceyrisay tababare Claude Puel
DEG DEG: Mino Raiola oo soo gaarey Cassa Milan + Video (Arrinta qandaraaska Donnarumma oo loo fadhiyo)
Sida ay u muuqan doonto shaxda xulka qaranka Spain kulanka habeen dambe oo la sii shaaciyey… (Yaa ku soo bilaabanay… https://t.co/KF1zisblo1
Kooxda Manchester United oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karto Harry Maguire. https://t.co/hAgZtMgAeM
Kooxda Liverpool oo eegeysa inay iska iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Naby Keita https://t.co/LKOh6JEnBD